Ngakanani isisindo se-Ibis Ripmo? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ibis ripmo for sale - Complete Manual
Ibis ripmo for sale - Complete Manual
Ngakanani isisindo se-Ibis Ripmo?
I-I-Ripmoinesisindo esingu-svelte 6. 25 lbs nge-DPX2 shock nokwakha okuphelele kuqala kuma-28 lbs.
Inkukhu kadoti! I-Ibis Ripmo. Udoti onemilenze emide, empeleni. Le nto inamakhono athile abucayi.
Yenza i-160mm ngaphambili i-145 ngemuva nge-geometry ephefumulelwe ngempela yiqembu le-Ibis Enduro. Bebefuna ibhayisikili elakhelwe ukugibela okusheshayo futhi nakanjani kunjalo, kepha sibuye sathola ntambama ukuthi lihle kahle ekukhuphukeni nasezimweni zejubane. Uma ubheka indlela i-Ibis ehlanganisa ngayo le nto, kusobala ukuthi libhayisikili elihle kakhulu.
Into eyodwa esishayayo nje ukuphenduka - kunokuthile okupholile ngawo wonke ama-engela owabukayo, ibhayisikili elibukeka limangalisa ngempela. I-geometry ehlakaniphile kuleli bhayisikili, uma ubheka isakhiwo, ungabona ukuthi inokuphakama okuphezulu kakhulu, okuphakeme kakhulu kokuphakama nokuthi ngenxa yezizathu eziningana. Okokuqala, kusobala izinzuzo zokuma okuphansi onazo ngokuhamba kahle okukuvumela ukuthi uphonsa ibhayisikili nxazonke.
Okwesibili, njengoba sibona ngabagibeli abaningi futhi lokhu kubuyela osayizi, ungenza kalula ukuthi ibhayisikili likhudlwana. Ungaya kufreyimu enkulu eyengeziwe uma uvame ukuba enkulu noma enkulu uma ugibela okulingene, lokhu kuzokunika ubude obude kakhulu bokuzinza ebhayisikili eliphambi kwakho, kodwa ibhayisikili ngeke kukhulu kakhulu ukuba ungahamba ngezinkinga nokuphakama kwesihlalo. Sibonile amabhayisikili ambalwa afana ne-YT Capra enza into efanayo nalokhu ne-Specialised Evo yawo entsha, ngobude uma kuqhathaniswa nokuphakama.
Yebo, kunengqondo kakhulu. Ama-Ibis anikeza iDW-Link amalayisense okumiswa ngemuva, futhi uma ubuka lokhu kuhamba ngebhayisikili, uyabona ukuthi kusebenza kangakanani lapho unyathela amabhuleki, uma kukhulunywa ngamaqhuqhuva abukhali, futhi kuthule kakhulu nje. Lapho yangishaya khona kuqala futhi kwaba nzima kakhulu kwakungeyona ngempela lapho ngangishesha, kepha esigabeni esisheshayo, kwesinye salezi zingxenye lapho uvame ukuduma nje bese uzama ukubamba umfutho wakho, nami ngingavele ngintante ngempela phezu kwakho konke bese uslayida, futhi yebo lokho kungubufakazi bokuthi ukumiswa kwangemuva kuhle kangakanani.
Uma uhlanganisa amasondo angu-29-intshi nalokhu kumiswa kanye namasondo abanzi angu-2.5-intshi max, unokudonsa namarimu abanzi izinto ezihlanganayo ukwakha ibhayisikili elikwenza uzizwe sengathi ungagibela ngokushesha. bese wehla, kancane uyazi ukuthi unokuthambeka okwanele ukuze uphume ezimeni ezikhohlisayo.
Futhi ibhayisikili elihle kangaka lendawo yobuchwepheshe ngenxa yenani lokudonsa onalo. U-100% yebo, lezo zinhlobo zezimo zejubane ezihamba kancane futhi uma ubhuleka kanzima mhlawumbe vele ukhuphuke ukuthambekela okukhazimulayo, imithwalo eminingi. Uma abantu befuna ukuyenza i-racy ne-zippy kancane, mhlawumbe ungabheka nxazonke ukufaka amathayi amancane.
Kepha ngokwami ​​ngiyawuthanda lowomuzwa. Yebo kuhle ngiqonde ukuthi, ungahle ucindezele ibhayisikili elithe xaxa ukuze ufike lapho, kepha uma usungene ezintweni zobuchwepheshe ngempela, uzizwa uqiniseka kakhulu. I-Ibis ibilokhu yaziwa njenge-boutique y, uyazi umkhiqizo waseCalifornia ngakho-ke amanani aphezulu.
Leli bhayisikili liyinani elihle impela lemali uma ucabanga ukuthi uyalazi idumela le-Ibis. Ine-drivetrain ye-SRAM GX, amabhuleki eShimano Deore agcina izindleko ziphansi, kepha unemfoloko enkulu yokumiswa futhi ngokusobala ifreyimu namasondo ayo e-Ibis futhi leli bhayisikili lingaphansi kuka-7 omkhulu ngakho-ke uyazi. Sibuyela emuva eminyakeni embalwa lokhu kungaba okungenani nebhayisikili elikhulu eliyishumi.
Uma ukhuluma ngemfoloko, ukumangala okukhulu, yi-FOX 36 esebenzisa i-GRIP damper kuphela, ngakho-ke i-damper eyisisekelo, kepha i-shit engcwele, izwa kamnandi. Yebo, bengimangele impela ngokusebenza kwayo futhi kuhamba kahle nonxantathu ongemuva, ine-DPX2 yokunciphisa ngemuva futhi yize kukhona umehluko omkhulu ekuhambeni, 15mm phakathi ngaphambili nangemuva, ibhalansi yinhle impela . Ngilungise imfoloko ukuze iqhubekele phambili ngandlela thile, angikakutholi ukuhamba okugcwele, kepha kungisebenza kahle kakhulu ngohambo oluncane kunxantathu ongemuva lapho.
Olayini abahlanzekile sebhayisikili ngempela Ukuhamba ngentambo okukhulu ngeshwa kufana nemikhiqizo eminingi yase-US ngaphandle kwemibandela yokuhambisa ibhuleki yangemuva ohlangothini lwesobunxele, okubuhlungu ngokuphelele embongolweni, kepha uma kungenjalo yenziwe kahle impela. Balokhu besikhohlwa
Ngiyazi awazi yini ukuthi sasungula iVegemite? Uma ubungenza leli bhayisikili libe yi-Mick yakho, yini ongathanda ukuyishintsha? Ngangizodlala ngokuzungeza ukuphakama kwamaphekula ukuze ngiqiniseke ukuthi ibhayisikili lakho alizizwa likhulu kakhulu.
Yebo. Noma inhlanganisela yesiqu noma yesiphathi ukuze uthole lokho kuphakama okuhle njengoba kuzwakala kukhulu endaweni engaphambili. I-KSdropper Post Lever, efakwe esikhundleni se-Underbar Lever.
Nginovalo oluncane uma ukhipha isithupha sakho kwizibambo ukushintsha irimothi yakho. Ngokusobala le ngxenye incintisana ngempela, abantu abaningi bayazinaka lezi zohambo olude ezingama-29ers, lokhu kuhamba kanjani uma kungaba ibhayisikili lomgwaqo noma ibhayisikili lomzila omude? Iyini imicabango yakho ngalokho? Njengoba sesenze imizila eminingi ngayo, njengemizila eminingi eyindilinga, sizizwa ngathi sisohlangothini olulula lomkhakha wemijaho. Ngakho-ke uma imigwaqo yakho yomjaho ingamemezi futhi ishesha njengabanye, leli bhayisikili licishe lifiphaze umugqa phakathi kwezinto esizisebenzelayo ezizungezile, ibhayisikili lomzila kanye nebhayisikili lomjaho.
Ngakho-ke ihlanganisa okuthe xaxa ngenxa yokusebenza kahle kwayo nesisindo esilula futhi umane umuzwa ojwayelekile wokukhanya. Ngokuphelele yebo, kepha uma ungahle uthande ukuyisebenzisa njengebhayisikili lokujaha, ungasebenzisa ngokunenzuzo ithubhu yezihlalo eziphansi uyenze ibe nkulu. Yebo, futhi uzothola isikhala esithe xaxa, isikhala esithe xaxa sebhanana.
UMick, ngemuva kohambo olumbalwa oluya eRipmo, ngabe kukhona imicabango yokugcina? Ngicabanga ukuthi leli bhayisikili lizothandwa kakhulu lapha. Ifiphaza umugqa phakathi kwebhayisikili lomgwaqo we-enduro nebhayisikili elihamba ngomgwaqo elisebenzisekayo, ngakho-ke akuyona ibhayisikili eliningi kakhulu ukugoqa uzungeze futhi uma usezindleleni zobuchwepheshe, yebo unokuzethemba okukhulu phakathi kwakho. Futhi isitayela esihle kakhulu, sihle kakhulu, kungaba ibhayisikili elihle futhi ungaziqhenya kakhulu ngedivayisi enjalo enesitayela.
Yebo. Ngingathini, unkosikazi wami uyaziqhenya ngendandatho kanokusho azitholele yona. Lolu hlobo lokufiphala kwemigqa phakathi komzila namabhayisikili e-enduro lufanele ngempela, ikakhulukazi e-Australia njengoba singekho njalo indawo enkulu edinga ama-slackangles agcwele nezinto.
Ngakho-ke uma ungakwazi ngiba nebhayisikili elakhelwe umjaho we-enduro. Ngicabanga ukuthi kuhle ukukwazi ukuyisebenzisa njenge-rounder yonke. -Yebo, ngicabanga ukuthi i-Ibishave iphumelele nakanjani.
Ngakho-ke, umsebenzi omuhle, zinyoni, kuhle ukuba semkhunjini omunye wenu futhi! Kuhle.
Ngilithenga kanjani ibis?
I-Ibisamafreyimu namabhayisikili aphelele ayatholakala kubathengisi emhlabeni wonke. Okwe-US neCanada, bhekisa ekhasini elithi 'thola umthengisi' bese ufaka ikhodi yakho ye-zip (noma vumela isiphequluli sakho ukuthi sazi indawo okuyo) ukuthola umthengisi wakho oseduze kakhulu.
Esihlokweni sanamuhla, ngizokhuluma ngezinto ebengingathanda ukuzazi ukube ngiqale ngohlelo lokusebenza lobuciko ibis paintx ibis paint x uhlelo lokusebenza olusebenziseka kalula ongalulanda esitolo seGoogleplay noma ku Amafoni akwa-Apple, futhi uhlelo lokusebenza lokudweba ongalusebenzisa futhi abaculi abaningi balusebenzisa lolu lunokulandwa okungaphezu kwezigidi eziyi-12 ngakho-ke lunokwethenjelwa kakhulu ukuthi lunezinhlobo eziningi zamapeni namafonti lunezendlalelo engizokufundisa zona ngaphezulu mayelana kamuva kepha ziyasiza kakhulu. Inezinto ezinjenge-symmetry nababusi futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kulula kakhulu ukuthola, kepha ngenza lo mbhalo ukukufundisa izinto ezazingidida ekuqaleni futhi angikaze ngizithole ngempela ukuthi le ndatshana izokusiza. Ngethemba ukuthi le ndatshana ikusiza ukuze sikwazi ukubona amabhodi wabaphambili nsuku zonke ngezansi obuciko obuthile obuhle kuwe, sineqoqo lami legalari negalari eku-inthanethi kepha ingxenye enkulu sizosebenzisa igalari yami kuphela ngakho-ke silapha ukubona konke izingcezu zobuciko ezahlukahlukene ozenzile nalolu hlelo lokusebenza engicabanga ukuthi zisuswe ngokuphelele futhi zalandwa futhi ukuze kungabi lolu hlelo lokusebenza noma yonke imidwebo engake ngayidalela lolu hlelo lokusebenza.
Ngakho-ke lapho sithepha okuthile, ungashaya inkinobho encane i kuqala. Le yinkinombo yolwazi lapha singashintsha isihloko bese sibhala ukuthi ngubani owenzile wabhala imininingwane ngayo, ungayisilayisha nakwamanye amakhasi kepha angizukuya kuyona ngoba angiyiqondi kahle, ngoba Angikaze ngisebenzise ngempela isikhathi se-timelapse sobuciko bakho bese uyidweba ngokulandelayo, inkinobho yokwabelana ngokusobala isharon bese amachashazi amathathu lapha singayigcina njengesithombe noma ungayigcina njengefilimu efana ne-timelapse engikukhombise yona noma wena ingabe ungayiphindaphinda noma ususe inkinobho yokuhlela ukuyivula futhi uyilungise, sinenkinobho yokuhlanganisa lapha esingayisebenzisa ukudala i-canvas entsha. Ungangenisa izithombe noma ukhethe usayizi we-canvas ohlukile.
Singasondeza ngaphandle nangaphakathi futhi sishintshe indwangu esebenza kalula futhi elula futhi ezisebenzisayo uma uzama ukuthola izindawo ezikhohlisayo esinokushintsha okukuvumela ukuthi ushintshe ngokushesha ususe irabha uye esibayeni, lapho Bazophinda bakhiphe khona lo khiye futhi ngizokufundisa ezinye ezimbalwa kamuva lezi zonke ziyizibaya izibaya kukhona nezitembu nezinto eziningi ezahlukahlukene uma ungenayo ibhonasi kufanele ubuke i-athikili efana nendatshana yesibili engama-30 noma into efana naleyo bese uthola Amahora angu-18 amahhala ukusebenzisa lokhu kodwa ngisanda kukusebenzisa bekufana nama-dollar amahlanu ukuthola iprimiyamu ngakho-ke anginazikhangiso futhi ngikwazi ukuzisebenzisa noma nini lapho ngifuna. Njengoba ukwazi ukubona kunezinhlobo eziningi zezibaya ngakho-ke kuyasiza kakhulu, futhi ungashintsha ipeni lokusula ukuze lingabukeki kanjena manje? irabha ejwayelekile efana nezinhlelo zokusebenza eziningi kepha ipholile ngoba ungayishintsha ibe isitembu noma yini. Kwibha elandelayo udinga ukushintsha umbala ukuze ukwazi ukudala wonke la ma-palettes lapha bese esenayo amaphalethi asethwe ngaphambili lapho le nkinobho ifihla amamenyu futhi nazi izendlalelo ukuze izingqimba zingaba nzima kancane ekuqaleni kodwa thina yiba nalelo Liso lokuqala ngokusobala elenza linyamalale ngakho-ke lisekhona kepha alisekho, futhi lengeza ungqimba olusha futhi into mayelana nezendlalelo ukuthi ikuphi uma ngigudluza leyo ngqimba ngaphansi, manje imigqa engivele ngiyidwebe ngombala obomvu, ngaphansi.
Kunezinkinobho ezimbalwa lapha, njengalena ephenya yonke useyili ubheke phansi noma ukuyiguqula kwesobunxele iye ngaphesheya kolunye uhlangothi ukuze ukwazi ukuyihambisa, ungashintsha ama-engeli ayo, noma ungakha umumo wedome, noma yini kuyasiza kakhulu ikakhulukazi uma uzama ukugqamisa izindwangu ezifanayo noma into efana naleyo ukushintsha ukushuba futhi njengokugoba kweqiniso anginaso isiqiniseko sokuthi ngikuphi lapha hhayi ubuciko bangempela, kumane nje kuyi-amesh ngakho kuphambene color soit owenza umbala ophambene nayo esondweni lemibala olikhama ukuze ngingayi kusendlalelo esingezansi bese ngiyisusa ukuze ngiqede, ngingashaya inkinobho yokuhlehlisa uma ngifuna ukuyibuyisa, kepha ngeke ngikwenze lokho ngakho-ke sinezinto lapha ezilungele ukufiphaza nazo, njengokufaka mnyama izinto eziningi okufanele udlale ngazo ukuze ubone ukuthi zishadani yini futhi ingasiza inhliziyo yakho. Angiyena uchwepheshe ngokuphelele ngakho angazi ngempela ukuthi ngingakutholi kanjani nhlobo. Sine, eh, ukucaca kwezinga bese singangeza isendlalelo lapha ngizokukhombisa nje ukuze sibe nenkinobho yokuhlehlisa inkinobho yokwenza kabusha esingakopisha futhi sinamathisele izinto lapha bese senza ungqimba olulandelayo engilwenza okokuqala angiqondanga kepha kungukuzinza ngakho-ke uma uthanda ukudweba futhi uma uthanda ukuthi sisemgwaqweni onamaqhuqhuva, manje kubonakala kuqondile, futhi sinamandla okuphela okwenza amathiphu akhombe lapho kuhle lapho Badweba izinwele , hlola omunye wabo ngokuhamba kwesikhathi ukukukhombisa, kepha kumane nje kuyizinto zobuciko njengezinto zangemuva.
Uma irabha yakho ingenkulu ngokwanele, ungashintsha uhlobo lwerabha, kufana nokukwenza lapha ukuyenza ibe nkulu, ukukubonisa amathiphu wokuthi ungayisebenzisa kanjani nokukufundisa okwengeziwe ngamazinga, ngizoqala ngisebenzise irula umbusi ukudweba indingilizi ephephuli ukwenza izinto zibe lula esikhundleni sokufaka umbala kuyo yonke into. Ungavele usebenzise ithuluzi lamabhakede ukuligcwalisa futhi ithuluzi lamabhakede ngeke lisebenze uma ungenazo izindawo eziqondile ezivaliwe. Manje umehluko phakathi kwe-Alpha Lock nama-clip kulapho ngicindezela i-Alpha Lock lapha ngikwazi ukushintsha imibala ukuze ngiyibone futhi uma ngifaka i-Onitas lapha ungayibona ihlala ngaphakathi kwe-Alpha Locked Area Indawo oyidonse ekuqaleni kodwa inkinga lapho ngizama ukusisula kusula yonke indingilizi Umehluko ekusikeni kulapho engingakusebenzisa khona ukudweba kuwo bese kuthi lapho ngisula ngifise sengathi kungasuli ungqimba lwesisekelo noma yini ofuna ukuyibiza ngakho-ke Ngizosebenzisa ibhulashi lomoya bese ngizama ukwenza lolu hlobo lubukeke ku-3D ngakho-ke libukeka njengebhola, uxolo, ibhola esikhundleni sendilinga oyisicaba ngakho-ke lokhu kuyinto elula ukuyenza ngebrush, futhi ngizokufundisa indlela elula yokwakha isithunzi ngokuhamba kwesikhathi futhi uqiniseke ukuthi unezinto ezinhle kakhulu lapho udweba umbuthano ungahlala ushaya inkinobho yokuhlehlisa uma kufanele uzisole ngokuthi umsindo uqhubeka uzwakala uxakile futhi unovalo, njengoba nginqunyelwe okungahleliwe, bese ngifaka ukuthi kuzwakala kuxaka kanjani, ngiyagula nje kancane futhi kwesinye isikhathi ngiyakhwehlela futhi angikwazi ho Ngisayekisa futhi ngiyeke ukuqopha izwi bese kufanele ngizame ukuqeda umusho wami ngivele ngigxumele ngokungena ngaphakathi kwesinye isikhathi kuzwakala sengathi kuyaxaka noma kuxakile kepha ngiqonde ukuthi yini engathi uma uzenza ngathi uyagula njengokuthi uyilinde nje ukwedlula, qiniseka ukuthi uma uphinda udweba imikhonto awugcini ngokungeza izithunzi kepha futhi wengeza okuvelele njengohlobo olukhanyayo lombala ukuzama ukuthola uphawu lokuthi ukukhanya kwehlobo kukhanya kule ndawo futhi kubangele izithunzi nokugqama imbulunga.
Lolu hlelo lokusebenza lusiza kakhulu. Angikaze ngibe nesikhathi noma amandla okusebenzisa amathuluzi okupenda noma yini ongayisebenzisa kumakhompiyutha, ngakho-ke ngisebenzise lolu hlelo lokusebenza kakhulu ukwenza ubuciko bami, i-iposton kuya ku-akhawunti yokudweba kaSony ngakho-ke bheka i-athikili, uma unesikhathi manje ukuthi sengiqedile ngebhola ngizofaka isizinda ngoba nje ngizizwa ngithanda ngakho-ke ngizohamba kahle kuso kuqala ngizokwenza lokho ngizofaka isithunzi. Ungahlala wenza le ndlela eyisisekelo noma kunini lapho uzama imigqa eyomile, kepha ngicabanga ukuthi lokhu akubukeki kukuhle kangako, ngakho-ke ngizokufundisa enye indlela engicabanga ukuthi ibukeka ingconywana ngicabanga ukuthi icacile ukusho ukuthi le ndatshana ayibhalwanga.
Ngizobuka nje isiqophi sesikrini engisenzile bese ngizama ukufaka umsindo omuhle kakhulu engicabanga ngawo. Ngakho-ke ngeke iphelele, ngakho-ke into yokuqala engizoyenza ukuthi: Ngizoya g ukulandela umkhondo wombuthano ukuze ubone ukuthi nginenkinga ethile yezobuchwepheshe lapha uma ngikhohlwa ukuthi ikuleya engezansi ezingeni elicacile kusobala ukuthi wena awuboni ukuthi uzophinda asebenzise ibhakede ukugcwalisa lowo mbuthano omusha omnyama, ubona kanjani ukuthi awusebenzi? Zizwe ulungile ngokuphelele ngoba izithunzi zibenza bathande uhlelo lokusebenza ukuthi bacabanga ukuthi ukuphela kwendaba. Ngakho-ke engizokukwenza ngokulandelayo ngizosebenzisa isici esikuvumela ukuba uzulazule endizeni ngayinye, futhi ngizosebenzisa isimo Sokubheka ukuyigoba, ngakho-ke kunjena, njengoba uma ilanga seliphumile futhi ngoba uyazi ukuthi ngezikhathi zasemini kwesinye isikhathi izithunzi zakho ziba zinde ngakho-ke yenza indilinga noma indilinga esezowela emgodini, ngubani owazi isici esilandelayo engizosikhombisa yisibonelo sokugcina ithebhu esikhulume ngayo ngaphambi kwalowo ofana nezizinda namaphethini ngakho-ke ngizokwakha ungqimba olusha lwaleli phethini ozohamba nalo lingaqhubeka nemibuthano enengqikithi yengemuva yombuthano futhi i-voila iphelele ngokulandelayo ngizokukhombisa okuncane kwalokho t nokuthi uhfx, okusho ukuthi hlunga uh, kunezinto eziningi ezahlukahlukene ongazenza lapha, njenge: B.
Shintsha imibala futhi uyenze ibukeke ifiphele noma ifane nokuthi kunamathani wezinto ezimnandi ongadlala ngazo. Ngizosebenzisa isici sohlaka lokufiphaza ukusenza sibonakale siphawuleka ngokwedlulele emaphethelweni yonke imibuzo ephawula ngezansi bese ngizoyiphendula ngokushesha okukhulu
Yenziwa kuphi i-Ibis Ripmo?
Ingabe i-Ibis Ripmo ibhayisekili lomzila?
I-IbisAmabhayisikili ngumkhiqizi wamabhayisikili asezintabeni osenyakatho yeCalifornia. Ikhiqiza iMojo ethandwayo,I-Ripmo, kanye nohlaka lwe-Ripley mountain bike phakathi kwezinye izinhlobo.I-Ibisimikhiqizo isatshalaliswa emazweni angama-33.
Ingabe i-Ibis Ripmo iwufanele?
Isiphetho. Uma kuphela okuhle kakhulu okuzokwenza, iIbis ripmoyibhayisikili elifanelekile lakho. Asikho esinye isithuthuthu emkhakheni wokuhlola esikhombise ukuthi siyasebenza njengezinto eziningi futhi siyakholisa ekukhuphukeni kanye nasezintabeni njengeI-Ripmo.
Ngabe i-Ibis Ripmo AF isinda kakhulu?
I-Ibis Ripmo AFNgokuningiliziwe
AmaBrutish, izimboni kanye nama-burly kungaba izichasiso ezinhle ze-I-Ripmo AF. TheI-Ripmo AFayihambelani kahle esigabeni sebhayisekili lomzila, kunjalokusinda kakhulufuthifuthiburly, ngakho-ke besifuna ukubona ukuthi iqhathaniswa kanjani nemishini yokushaya kanzima ye-enduro.13. 2020.
Ngabe amabhayisikili e-Ibis mahle?
Ukuya ngezibuyekezo ezishiywe abathengi abaningi, kuphephile ukusho lokhoI-IbisImijikelezo yenza kahlekahleemakethe. Azikho eziningiIbhayisikili le-Ibisizibuyekezo online kepha ukubuyekezwa okuningi komsebenzisi. Iningi lamakhasimende anelisekile ngemikhiqizo.
Ngabe ama-Ibis avikelwe?
Njengazo zonke izinhlobo zomdabu,ibiskukhonaivikelwengaphansi kwe-I-NSWUMthetho Kazwelonke WamaPaki Nezilwane Zasendle 1974.
Ngabe ama-Ibis ozimele enziwe eChina?
I-HD iyiyenziweeTaiwan. Amaholo acishe afane nase-US. Amanye amamodeli wethukwenziwe eshayina. Iningi lekhabhoniozimelekukhonakwenziwe eshayinaKonje.
Ingabe i-Ibis ingumkhiqizo omuhle?
Ukuya ngezibuyekezo ezishiywe abathengi abaningi, kuphephile ukusho lokhoI-IbisImijikelezo isebenza kahle emakethe. Azikho eziningiI-Ibisukubuyekezwa kwebhayisikili online kepha ukubuyekezwa okuningi komsebenzisi. Iningi lamakhasimende anelisekile ngemikhiqizo.
Iyini intengo emaphakathi ye-ibis ripmo?
Intengo emaphakathi elinganisiwe ye-Ibis ripmo esetshenzisiwe ingu- $ 3,991. Intengo emaphakathi enesisindo inciphisa zonke izintengo ziye enanini elilodwa. Inyanga ngayinye sibala kabusha inani lentengo elilinganisiwe lemikhiqizo etholwe ngombuzo othi 'Ibis ripmo' phakathi kwebanga lentengo 50 - 10000.
Ingabe i-Ibis ripmo V2 ibhayisikili le-enduro?
Futhi nge-Ibis Ripmo V2, lawo ma-clairvoyants afakazelwe kahle kakhulu. Ikhabhoni, engasindi, ehlala isikhathi eside, lezi yizinto zonke iRipmo ebikade inazo. Kepha kungezwe kulokho, iRipmo V2 ifake izici eziningi eziphumelele kakhulu eziguqule iRipmo AF yaba ngumshini wokuzijabulisa we-enduro.
Ngabe intaba ye-iscg 05 ekwi-Ibis ripmo iyasuswa?
Intaba yokuzikhethela ye-ISCG 05 ikhona uma uyifuna, iyasuswa uma ungafuni. Ama-Ibis ame ngemuva kwemikhiqizo yethu. Uma kuyiphutha labo, bazolilungisa. Amafreyimu e-aluminium asekelwa yiwaranti yeminyaka engu-7 efanayo namakhasimende amahle kakhulu njengemikhiqizo ye-carbon.